किन भारत जाँदैछन् महामन्त्री कोइराला ? – Nepal Press
२०७८ कार्तिक ५ गते १८:०८
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला ३ दिनका लागि भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
मुम्बईमा उपचाररत कांग्रेस सांसद कर्मा घलेलाई भेट्न महामन्त्री कोइराला भारत जान लागेका हुन् । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन संघारमा रहेकोले कोइरालाको भ्रमणलाई राजनीतिक रूपमा पनि हेर्न खोजिएको छ । महामन्त्री कोइरालाका राजनीतिक सहयोगी भरत तिवारीले भने भ्रमण विशुद्ध व्यक्तिगत रहेको बताए ।
‘कर्माजी मुम्बईको ब्रिज क्याण्डी अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गराइरहनुभएको छ । अग्रज नेता प्रदीप गिरी पनि दिल्लीमा उपचाररत हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई भेट्नेबाहेक कुनै कार्यक्रम छैन’, तिवारीले नेपाल प्रेससँंग भने ।
कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी पनि भारतको दिल्लीमा उपचार गराइरहेका छन् । महामन्त्री कोइराला, नेपाली कांग्रेस संखुवासभाका सभापति दीपक खड्का लगायतको टोली भारत जान लागेको हो । उनीहरु शनिबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलबाट भैरहवा गई सडकमार्गबाट मुम्बई जानेछन् । महामन्त्री कोइराला सोमबार नेपाल फर्कनेछन् ।
प्रकाशित: २०७८ कार्तिक ५ गते १८:०८
सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारको घोषणा
साझा उम्मेदवारको नाम कुर्दै ‘चाक्सीबारीको आगन’मा कांग्रेस कार्यकर्ता
एकान्तबासमा रहेर कस्तो प्रतिवेदन लेख्दै छन् प्रचण्ड ?
कर्णालीका महाधिवेशन प्रतिनिधि शाहीको आरोप- कर्णालीका अधिवेशनमा सत्ताको दुरुपयोग भयो
कांग्रेस महाधिवेशन: काठमाडौंमा दश हजार झण्डा राखिँदै
महिला जनप्रतिनिधिलाई दुर्व्यवहार गर्ने माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष पक्राउ
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने नेता गुरुङको घोषणा